XOG: Maxaad ka ogtahay Sababta rasmiga ah ee uu Wasiir ka tirsanaa Xukuumadda Kheyre uu isku casilay?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Maxaad ka ogtahay Sababta rasmiga ah ee uu Wasiir ka tirsanaa...
Cabdikariin Dhalac oo is-casilay
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirkii Ku-xigeenkii Wasaaradda Xanaadda Xoolaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdikariin Dhalac ayaa iska casilay xilkii wasiirnimo ee uu ka hayay xukuumadda Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Cabdikariin Dhalac qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshadda ayuu ku sheegay in xilkii isaga casilay faragalinta ay Xukuumada Soomaaliya ku heyso Arimaha maamul u sameynta Galmudug.
Wuxuuna ugu baaqay Madaxda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya in ay faragalinta ka daayaan maamulka Galmudug, islamarkaana rabitaanka Shacabka la tixgaliyo.
Hadda hoos ka akhri qoraalka Wasiir Cabdikariin Dhalac uu soo dhigay bartiisa.
Wasiir Cabdikariin Dhalac
wasiir Galmudug oo iscasilay